FARITANIN’I MAHAJANGA : Hanomboka anio ny Fav Polio andiany faha 12
Tsy tratra ny tanjona tamin’ny hetsika fanaovana vaksiny fanefitry ny poliomielita farany teo. Marisarisa ireo ray aman-dreny amin’ny fanaovana vaksiny ny zanany, noho ny resaka maro miely. 17 janvier 2018
Miditra avy hatrany amin’ny andiany faha 12 ny sampan-draharaha miahy ny fahasalamam-bahoaka eto Mahajanga ary hatomboka anio alarobia izany. Tsiahivina moa fa ny zaza latsaky ny 5 taona no atao vaksiny fanefitry ny polio. Izany dia hiarovana azy ireo amin’ny aretina lefakozatra, izay tsy mamela mahazo fa na mamono na mamela takaitra mandra-maty.
Teto Mahajanga no nahitana trangana polio ka zaza tsy vita vaksiny no voa. Amin’ny maha vaksiny azy mantsy dia otrikaretina nohalefahina no ampidirina amin’ny ankizy ka lasa hery miaro azy. Lasa misy ilay otrikaretina ao amin’ny zaza vita vaksiny saingy tsy mitondra aretina aminy. Raha zaza tsy vita vaksiny kosa no azon’ilay otrikaretina avy dia marary. Ny famerimberenana ny vaksiny dia manamafy ny hery fiarovana amin’ny aretina lefakozatra ao amin’ny ankizy iray. Indrindra moa fa miova endrika ilay otrikaretina indraindray. Io indrindra no tokony hanaovana vaksiny matetika ny ankizy.
Mba handresy lahatra ny vahoaka moa dia efa maro ireo mpitsabo no nitondra ny zanany hatao vaksiny ary anisany nitondra ny zanany koa ny ben’ny tanànan’i Mahajanga, saingy mbola tsy naharesy lahatra hatreto. Miezaka hatrany mandresy lahatra ny ray aman-dreny ny tompon’andraikitry ny fahasalamana eto an-toerana satria tsy azo atao raha tsy misy fankatoavan’ny ray aman-dreny io vaksiny io. Marihina moa fa vaksiny atete amin’ny vava izy io.
Efa vonona koa ny ao amin’ny Distrikan’Ankazobe
Enta-mavesatra ho an’ny fianakaviana iray ny fananana zaza mararin’ny lefakozatra na ny polio. Ity farany izay aretina mifindra mahatonga fahalemena tampoka ho an’ny rantsam- batana. Tena zava-doza tokoa araka izany ity lefakozatra ity raha tsy voaaro dieny mbola kely ny zaza. Mahakasika izay indrindra dia namory ireo sampan-draharaha rehetra miasa ao anivon’ny distrikan’Ankazobe ny fari-piadidiam-pahasalamana any an-toerana ny alatsinainy lasa teo.
Famoriana izay nifototra tamin’ny fanentanana ny vahoaka sy ny mpiara-monina hanaiky ny zanany hatao vaksiny. Fantatra mantsy izao fa ho avy indray ny hetsika fanaovam-baksiny miaro amin’ny aretina « Polio » na ny lefakozatra. Hetsika izay hotanterahina manomboka ny 17, 18, 19 janoary ho avy izao.
Fotoana ireo hanamafisana ny andron’ny Fav Polio izay tafiditra amin’ny andiany faha-12. Isan’ny mandray anjara sy manatanteraka izany hetsika izany ny ao amin’ny distrikan’Ankazobe, ka ireo zaza vao teraka ka hatramin’ny dimy taona no hoarovana amin’ izany aretina lefakozatra izany. Toy ny efa fanao dia vaksiny atete amin’ny vava no hatao mandritra ny hetsika. Raha ny ao amin’ny fari-piadidiam-pahasalamana Ankazobe manokana dia efa vonona avokoa ny ekipa rehetra amin’ny fanatanterahana izany.
Tsy nisy olana ny andiany 11 lasa
Nisy araka izany ny fanentanana ny vahoaka mba samy handray anjara daholo amin’ny fanaovam-baksiny ireo zaza.
Eo ihany koa ny tokony handraisana tsara sy ampanajana ireo mpanentana ara-pahasalamana izay hitety isan-tokantrano hanome io vaksiny io ho an’ny zaza latsaky ny dimy taona. Nambaran’ireo tompon’andraikitra ara-pahasalamana fa olona efa tsara hofana avokoa ireo alefa manatanteraka ny asa ka tsy misy tokony hatahoran’ny olona. Araka ny nambaran’ny fari-piadidiam-pahasalamana ao Ankazobe dia tsy mbola nisy mihitsy ny olana tamin’ny fanaovana izao hetsika ady amin’ny aretina lefakozatra izao nandritra izay andiany 11 lasa izay. Ny zavatra tsapa àry dia nitondra fahasalamana sy tanjaka ho an’ny zaza avokoa ny vaksiny rehetra tontosa.
Amin’izao fotoana izao dia efa an-dalana ny fahazoana ny fanamarinana avy amin’ny firenena mikambana mahakasika fahafongoran’ny aretina lefakozatra eto amin’ny firenena malagasy. Tokony hifanome tanana araka izany ny rehetra mba hahafongotra izany tanteraka. Azo ambara mantsy fa isany lalana iray mety hanatsara ny fifandraisan’i Madagasikara amin’ny any ivelany ny fahatafitana amin’ny ady amin’ny valan’aretina, toy ny polio. Izany hoe tsy maintsy hisy fiantraikany tsara eo amin’ny lafiny toekarena sy ny fizahantany ary ny maro hafa.